Okwunigwe na-arụ ọrụ, Lamp na-arụ ọrụ, Ndị na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri na ndị na-edozi na China
Nkọwa:Ejiri Ije Ozi,Ọfụma Ochie,Okpokoro Okpokoro Ogwe,Ije Ozi,,
Home > Ngwaahịa > Ibu Ọrụ > Ejiri Ije Ozi
Ngwaahịa nke Ejiri Ije Ozi , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ejiri Ije Ozi , Ọfụma Ochie suppliers / factory, wholesale high-quality products of Okpokoro Okpokoro Ogwe R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
100W Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị ka 100W  Kpọtụrụ ugbu a
Mee ka 80W rụọ ọrụ na-arụ ọrụ na oge nwa oge  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụahịa otu: USD 52 - 56 / Piece/Pieces
Ọrụ a na-arụ ọrụ dị iche iche a na-arụ ọrụ ọtụtụ dị arọ na ụdọ ike 10ft nke na-ekwe ya maka nkwụsị ọsọ ọsọ na ọhụụ dị mfe. Ma ọ dịghị achọta ọ bụla, n'ihi ya ọ dịghị mkpa na onye ọrụ ahụ ịdọrọ nnukwu ụlọ ndị na-agba ballast gburugburu. Ogologo...
China Ejiri Ije Ozi Ngwa
A na-arụ ọrụ Bbier Work Lights na eriri USB ma kpụzie ya na ngwụsị njikọ ya. Okpokoro Igodo Ubi dị na 80 watt, 100 watt, 120 watt na 150 watt, ọ bụla na-abịa na plastik ma ọ bụ cages metal. A na-ahazi ọrụ ịrụ ọrụ dị arọ maka eji eme ihe n'èzí nakwa na e depụtara EC ROHS.
Ìhè Na-arụ ọrụ dị mma maka ebe obibi ọkụ, ụlọ ahịa na ebe ọrụ siri ike. A na-eme ka oriọna rụọ ọrụ iji gbochie abrasions, mmiri na ìhè anyanwụ. Nlekọta oghere ya na-echebe bọlbụ ọkụ ma mee ka ọ dị ngwa ma dị mfe iji dochie ya mgbe ọ dị mkpa. Ejiri ike na-arụ ọrụ na nko iji tinye ebe ọrụ. LED ọrụ ìhè bụ ETL depụtara na-ndokwasa nso keguru mmiri ebe na-eme ka ọ a oké LED ngwọta ìhè ọrụ ebe, ụgbọala ụgbọala, na-ewu saịtị na ọtụtụ azụmahịa na residential ngwa.
Ejiri Ije Ozi Ọfụma Ochie Okpokoro Okpokoro Ogwe Ije Ozi Ejiri Ije Ozi 80W